Firy ny planeta ao amin'ny Solar System :: Ireo Planeta Ankehitriny -
Firy ny planeta ao amin'ny rafi-masoandro?
Ny isan'ny planeta masoandro mandritra ny tantara farany
Ny valiny ofisialy ankehitriny: 8
Ny valiny ofisialy tsotra amin'ity fanontaniana ity dia ny 8. Ny planeta an'ny masoandro izay miorina amin'ny Masoandro dia Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Marina izany hatramin'ny 2006, raha ny vondrona astronomia iraisam-pirenena no namaritra ny atao hoe 'Planet' ary koa inona ilay hoe 'Dwarf Planet'.
Misy planeta dwarf ofisialy 5 izao: Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, Eris.
mifanaraka ve leo sy taurus
Ny isan'ny planeta alohan'ny 2006: 9
Talohan'ny 2006, ny isa ofisialy ny planeta dia 9 satria i Pluto dia navarina indray tamin'ity taona ity avy amin'ny planeta ka hatramin'ny planeta dwarf.
Ny isan'ny planeta alohan'ny 1930: 8
Talohan'ny nahitana an'i Pluto (tamin'ny 1930), dia planeta 8 ihany - ny planeta ofisialy 8 ihany izay ananantsika ankehitriny.
Ny isan'ny planeta mialoha ny 1854: 8 - 23
Tamin'ny 1801 ka hatramin'ny 1845 dia nisy planeta 23 hatramin'ny 23. Ireo dia vokatry ny fahitana an'i Ceres, Pallas, Vesta ary Juno tamin'ny voalohan'ny taonjato - izany rehetra izany dia sokajiana ho planeta. Avy eo manodidina ny 1845-49 dia faty hafa no hita (Astraea, Hebe, Iris, Flora, Metis ary Hygiea) ary koa Neptune (1846) ary nandritra ny taona vitsivitsy (ao anatin'izany i Parthenope, Victoria, Egeria, Irene ary Eunomia hita) tapaka fa ilaina ny fanasokajiana ny asteroid hamaritana ireo vatana ao amin'ity 'Asteroid Belt' vao hita ity. Raha vantany vao nanjary eken'ny besinimaro ny fanasokajiana ny asteroid dia tavela tamin'ny planeta 8 ananantsika androany isika. Amin'izao fotoana izao dia manana asterôida 300 000 katalaogy isika, angamba misy iray tapitrisa na mihoatra miandry.
Ny isan'ny planeta alohan'ny 1801: 7
Mazava ho azy talohan'ny nahitana an'i Ceres (1801), ny isan'ny planeta dia 7: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus.
Ny isan'ny planeta alohan'ny 1781: 6 sa 8?
Talohan'ny taona 1781 rehefa hita i Uranus dia nisy planeta 6 - hitan'ny mason'izy ireo rehetra ary fantatry ny ntaolo. Na izany aza, Mercury sy Venus dia matetika no nantsoina tamin'ny anarana samy hafa miankina amin'ny fisehoan'izy ireo amin'ny lanitra amin'ny hariva na ny lanitra maraina ... ka angamba afaka milaza isika fa misy planeta 8!
Mazava ho azy talohan'ny tena niheveran'ny olona ny tany ho planeta, ny ' Planeta klasika 'nampiasaina tamin'ny fanandroana dia nahitana ny Masoandro sy ny Volana ... ka mety hiteny ianao fa nanana planeta 7 izahay (izany hoe The Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter ary Saturn).
Ny planeta ofisialy sy ny planeta dwarf milamina
firy ny planeta ananantsika ankehitriny
tabilao sy dikany celtic knot
fampifanarahana lahy sy vavy vavy i aquarius
biby inona no famantarana capricorn